MACLUUMAADKA IYO SAWIRRADA EEYAHA BORADOR - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirrada eeyaha Borador
Xudduudka Collie / Labrador Eeyaha Caanbaxa ee Isku-Dhafka ah
'Maci waa Borador (Border Collie / Chocolate Lab mix) oo halkaan lagu muujiyey isagoo jira 9 bilood. Iyadu waa qof aad u caqli badan, firfircoon, oo waxay jecel tahay bannaanka oo ku hoos jilicsan bustayaal. Waxay awooddaa: fadhiiso, jiifto, ciyaar dhimatay, rogrogto, albaabka xidho, masaxdo baalaheeda, u keento wax kasta oo aad weydiisato, kuna wareejiso wareegyada, amarka. Iyadu sidoo kale waxay jeceshahay inay calaliso, laakiin waxay ogtahay inay ku calashado uun waxyaabaha ay ku ciyaaraan oo aan ahayn kabo iwm.
Borador ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Soohdinta Collie iyo Labrador dib u habeyn . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Fuula Borador (Xadka Eyga Collie / Eyga isku dhafka ah) ee jira 5 sano
'Dozer the Border Collie / Lab mix (Borador) wuxuu leeyahay tamarta Xudduuda Collie iyo awoodda ugaarsiga shimbiraha ee Shaybaarka. Waa eey weyn.
'Rex waa 3 bilood jir Labrador / Border Collie cross puppy. Hooyadiis waxay ahayd Border Collie, aabihiis wuxuu ahaa Labrador madow. Wuxuu umuuqdaa inuu leeyahay dabeecada Labrador laakiin dhamaan tamarta Xudduud Collie !! Ma awoodi doontid inaad isaga daaliso! Wuxuu jecel yahay inuu wax xoolo raaco, gaar ahaan dadka !! Xaqiiqdii isagu ma helayo ciyaarta la soo qaado sida Labrador. Waa inaan sugnaa oo aan eegnaa inuu u muuqdo sida Collie ama Shaybaar !!
Mickey Roonie Rourke the Borador (Border Collie / Labrador Retriever mix) at 1 ½ sano jir— Waxaan ka soo badbaadinay rodolkii maalin ka hor inta aan loo baahnayn in la shaaciyo. Isagu waa sheybaar iyo xadka Collie. Aad iyo aad ayaan u jecel nahay isagana wax ku soo kordhiyay qoyskeena. '
Charlie the Borador (Border Collie / Labrador Retriever mix breed) eey
Qaado shaybaar jaalle ah iyo Border Collie isku dar ah (Borador) markay jiraan 6 bilood
Qaado shaybaarka huruudda ah iyo isku darka Collie (Borador) da'da 1 sano jir— Tani waa isaga oo booskiisa la qaadanaya qoyska qiyaastii. 1 sano. Si aan fikrad kaaga siiyo cabirkiisa, wuxuu u dhexeeyaa 60 ilaa 65 rodol oo ah 1 sano iyo 8 bilood. '
'Digir macaan, haweeneyda Border Collie / yellow Lab mix ee 4 sano jir ah waa eey aad u macaan dabeecad leh waxayna ku fiican tahay qoyska iyo dadka la yaqaan, laakiin waxay si aad ah uga gaashaantaa shisheeyaha ama eeyaha qalaad. Iyadu kuma weyna dabaasha biyaha, laakiin waxay leedahay cagaha webbarka. Iyadu sidoo kale waa qof caqli badan oo jecel jimicsiga. Waxay la nooshahay qoys ka kooban 3 (hooyo, aabe, gabadh) iyo lix bisadood oo si weyn ula noola bisadaha. Waxaan ka qaadanay iyada oo ah 3 bilood jir SPCA maxalliga ah waana xayawaan weyn! Waxay qiyaastii tahay 40 rodol oo qiyaastii 22 1/2 inji dherer min sagxad ilaa garbaha iyo 30 inji dhererkeeda sanka ilaa dabada. Iyadu waa qof wax cuna oo aad u jecel.
Rider the Border Collie / Lab mix puppy at 4 bilood jir
'Kani waa Kelsea midab buluug ah oo Merle Border Collie cross Labrador. Waxay ahayd eeygii ugu fiicnaa adduunka, had iyo jeer ciyaar, caqli badan oo caqli badan, si fudud loo tababaray (waxay siin kartaa hi-5's) waxayna noqotay saaxiibka ugu fiican dhammaan xubnaha qoyska. Nasiib darrose way xanuunsatay 2 bilood gudahood waa in la dejiyaa iyadoo jirta 18 bilood. Runtii way kacsanayd kansarka sanbabadeeda . Aad ayaa loo tebay. Waxay ahayd isku dhaf weyn oo taranka leh tamarta iyo caqliga a Soohdinta Collie iyo jacaylka iyo wehelnimada a Labrador . Ha u oggolaan sheekadan kansarka ah inay kaa fogeyso waxyaabaha isku dhafka ah, nasiib wanaag ayaan ahayn, laakiin waxaan raadin doonnaa eey kale oo isku mid ah mustaqbalka. '
Eeg tusaalooyin badan oo Borador ah
Borador Sawirada 1
qeybtii beagle qeybtii basset hound
shetland ido iyo isku dhafka poodle
sheltie australia adhijir isku qasan eeyo